လီဗာပူး vs တော့တင်ဟမ်?? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၃၆ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်မျာ - xyznews.co
လီဗာပူး vs တော့တင်ဟမ်?? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၃၆ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်မျာ
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ပွဲကြီးပွဲကောင်း ကတော့ လီဗာပူး နဲ့ တော့တင်ဟမ်တို့ အန်ဖီးမှာ ကစားသွားရမယ့် ပွဲစဉ် ဖြစ်ပြီး နှစ်သင်းစလုံးဟာ မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီနဲ့ ဖြစ်တာကြောင့် တကယ့်ကို ရင်ခုန်စရာကောင်းမယ့် ပွဲစဉ် ဖြစ်လာမှာပါ။
၁~ချဲလ်ဆီး Vs ဝုဖ်
အဲဗာတန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှု ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူတို့မှာ ဖိအားတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ စပါး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ဟာ ချဲလ်ဆီးနဲ့ သိပ်ပြီး မကွာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီး ချဲလ်ဆီး အနေနဲ့ သူတို့ နောက်ကျောကို ပြန်ကြည့်နေရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရမှတ်တွေ အသာစီး ရထားခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ခြေချော်လို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
၀ုဖ်ကလည်း ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခုဆိုရင် ၃ ပွဲဆက် ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပြီး စိတ်ပူစရာကတော့ သူတို့ဟာ ၃ ပွဲစလုံး တစ်ဂိုးမှ မရခဲ့တာပါ။ သူတို့ဟာ တစ်ရာသီလုံး သွင်းဂိုးပိုင်းမှာ ပြသနာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဝုဖ်တို့ ချဲလ်ဆီးကို သိပ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ ချဲလ်ဆီးတို့ ထုံးစံအတိုင်း အနိုင်ရသွားမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် : ချဲလ်ဆီး ၂-၀ ဝုဖ်
၂~ဘရိုက်တန် vs မန်ယူနိုက်တက်
ဘရိုက်တန်ရဲ့ ဧပြီလ ရလဒ်တွေဟာ တအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ် စပါး နဲ့ ဝုဖ်တို့ကို အဝေးကွင်းမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး သူတို့ဟာ အဝေးကွင်းမှာ ရလဒ်အကောင်းဆုံးတွေ ထဲက တစ်သင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လို မန်ယူနိုက်တက်ကို မြင်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် လုံး၀ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဘရန့်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာ ကစားပုံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီရာသီကို ပုံစံကောင်းနဲ့ အဆုံးသတ်နေပြီး နောက်ဆုံး ၃ ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ သူ ဒီပွဲမှာ ထပ်ပြီး ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ အံံ့သြမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီပွဲမှာ ဘရိုက်တန်ကိုပဲ ကြိုက်မိပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ဘရိုက်တန် ၂-၁ မန်ယူနိုက်တက်
၃~လီဗာပူး vs တော့တင်ဟမ်
ဒီလီဗာပူးအသင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ချီးကျူးစရာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ နိုင်ပွဲတွေက ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က နယူးကာဆယ်ကို နိုင်ခဲ့တာဟာ ကြီးမားတဲ့ ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားရက်က စပိန်မှာ comeback လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်း သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြသလိုက်တာပါပဲ။ လူး၀စ်ဒီယက်ဟာ ဗီလာရီးရဲယ်နဲ့ ပွဲမှာ ပွဲကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး သူ့ကို ဒီပွဲမှာ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဒါဟာ စပါးအတွက် အရေးကြီးပွဲစဉ်ပါ။ အာဆင်နယ်ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုင်ပွဲတွေကြောင့် စပါးတို့ ဒီပွဲကို ရှုံးနိမ့်လို့ မရဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဆွန်ဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံပြသနေပြီး သူဟာ ရွှေဖိနပ်ဆု အတွက် ဆာလားနဲ့ အပြိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအချိန် ဥရောပမှာ ဘယ်အသင်းမှ လီဗာပူးထက် ပိုကောင်းတဲ့ form မှာ ရှိမနေပါဘူး။ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ ရှုံးနိမ့်မယ့်ပုံ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အန်ဖီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : လီဗာပူး ၃-၁ တော့တင်ဟမ်
၄~အာဆင်နယ် vs လိဒ်
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ၀က်ဟမ်းကို လွှမ်းမိုး မကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အာတီတာဟာ ဒါကို လုံး၀ ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို အရေးကြီးပွဲစဉ် ၃ ပွဲကို ဆက်တိုက် နိုင်ခဲ့တာပါ။
အဆင့် ၄ နေရာဟာ အာဆင်နယ်အတွက် တစ်ဖြည်းဖြည်း နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စပါးဟာ အန်ဖီးမှာ ခက်ခဲတဲ့ ပွဲစဉ်ကို ကစားသွားရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒါဟာ အာဆင်နယ်တို့ ပြိုင်ဘက်ကို အမှတ်ဖြတ်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က လိဒ်တို့ safe ဖြစ်ပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မသေချာတော့ပါဘူး။ ဘန်လေ နဲ့ အဲဗာတန် တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေက ကြီးမားတဲ့ နိုင်ပွဲတွေ ရခဲ့တာကြောင့် လိဒ်တို့ ဖိအားတွေ များလာခဲ့ပါတယ်။
စီးတီးနဲ့ပွဲစဉ်က လိဒ်ရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ သိပ်ပြီး မကောင်းပါဘူး။ ဒီပွဲမှာ သူတို့ ဒီထက် တိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဟာ မထင်မှတ်ဘဲ ရမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲမှာတော့ ဒီလို ဖြစ်မယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ အာဆင်နယ် နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : အာဆင်နယ် ၂-၀ လိဒ်
၅~မန်စီးတီး vs နယူးကာဆယ်
မက်ဒရစ်မှာ ကြားရက်က အသဲကွဲခဲ့ပြီးနောက် ဒီပွဲဟာ အခုဆိုရင် မန်စီးတီးရဲ့ ရာသီအတွက် အထူး အရေးကြီးတဲ့ ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တက်နိုင်သမျှ ဒီရှုံးပွဲကို မေ့ပျောက်ချင်နေမှာပါ။ လိဂ်မှာ သူတို့ရဲ့ form ဟာ တအားကို ကောင်းနေခဲ့ပေမယ့် ဒီပွဲဟာ လွယ်ကူမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နယူးကာဆယ်ဟာ ဒီလိဂ်ဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံရနေတဲ့ အသင်းတွေထဲက တစ်သင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လီဗာပူးကို ခက်ခဲမှုတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နယူးကာဆယ်ဟာ safe ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကာ ဒီပွဲမှာ ဘာမှ ဆုံးရှုံးစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အီတီဟတ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စီးတီးဟာ နိုင်ပွဲရဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အသွေး ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : မန်စီးတီး ၂-၀ နယူးကာဆယ်
ဘရန့်ဖို့ဒ် ၂-၁ ဆောက်သမ်တန်
ဘန်လေ ၁-၁ အက်စတွန်ဗီလာ
ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ၃-၁ ၀က်ဖို့ဒ်
လက္စတာ ၀-၁ လက္စတာ
နော့ဝှစ် ၀-၂ ၀က်ဟမ်း
Previous Article ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မန်စီးတီးရဲ့ ရင်ကွဲခဲ့ရမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
Next Article ယနေ့ည ရင်ဆိုင်ရမယ့် ရော်နယ်ဒို အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဘရိုက်တန် နည်းပြ ဂရေဟမ် ပေ‌ါ်တာ